တို့မြန်မာ သောက်ပေါရုပ်ရှင်ကားများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » တို့မြန်မာ သောက်ပေါရုပ်ရှင်ကားများ
Posted by မစ္စတာသန့် on Oct 10, 2010 in News | 25 comments
ပြောရရင်လည်း ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းသလိုများဖြစ်နေမလားမသိဘူး…အခုတစ်လောကြည့်ရတဲ့ မြန်မာရုပ်ရှင်တွေဟာ..တော်တော့်ကို ပေါကြောင်ကြောင်နိုင်လွန်းလှသဖြင့် ကြည့်မိသည့် မိမိကိုယ်ကိုယ်ဘဲ အပြစ်တင်မိတော့သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမယှဉ်နိုင်သည်ကတော့ ထားပါတော့…ဒီလောက်ကြီး သောက်ပေါကျလွန်းလှသည်ကတော့ လွန်းလွန်းလာပြီဟုထင်သည်။ အကယ်ဒမီ လေးငါးဆုရရှိထားသော မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်း…ပေါ..နောက်ပေါက် မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်း ပေါ..ဒါရိုက်တာကလည်းပေါ…တော်တော့်ကို စိတ်ကုန်ဖို့ကောင်းနေပြီဖြစ်သည်။ အနုပညာဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အဆင့်အတန်းကို သွယ်ဝိုက်ဖော်ပြသည့် ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုတော့ လက်သန်းလောက်ဘဲ အထူရှိသည့် အတင်းကလိထိုးရေးထားသော ပေါကြောင်ကြောင်စာအုပ်ကို ဒီစာရေးဆရာကဘဲ…ရုပ်ရှင်တစ်ကားစာ ဇာတ်ညွန်းပြန်ရေး…မူရင်းမှာ မပါတာတွေပြန်ထည့်…မရှည်ရှည်အောင်လုပ်…အင်တာဗျူးတော့…မသိရင်..ဒါရိုက်တာရော..မင်းသားမင်းသမီးတွေကော…စာရေးဆရာကပါမကျန်.အလွန်ကမ္ဘာကျော် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကား ရိုက်ထားသည့် ဒီဇိုင်းကြီးတွေနဲ့….ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ကဘဲ…အဆင့်အတန်းတွေနိမ့်ကုန်တာလားမသိဘူး…ပြောတော့ကိုရီးယားကားတွေကို သနားလိုက်တာတဲ့..အနုပညာဆိုတာကြီးကိုလည်း ပါးစပ်ကမချကြဘူး…ပိုက်ဆံတွေနှမြောဖို့ကောင်းလိုက်တာ..ဘယ်တော့ မှဘဲ…ဒီသောက်ပေါရုပ်ရှင်တွေ ပျောက်ကွယ်မလဲမသိပါဘူးဗျာ..လုပ်ကြပါဦး…ရင်ဘတ်ထဲက ..တကယ့်တန်ဖိုးရှိတဲ့..ကြည့်ပြီးရင်တသသဖြစ်ကျန်ခဲ့မယ့် ရုပ်ရှင်လေးတွေတော့ ဒီတစ်သက်ကြည့်ရပါ့ဦးမလားမသိဘူး….
thant htun has written2post in this Website..
View all posts by မစ္စတာသန့် →
တစ်ခြားကားတွေရှိသေးတယ် … ကျော်ဇောဟိန်း ရိုက်နေတဲ့ ရာဇ၀င်ကားတွေလေ အားလုံးဟာသတွေချည်းပဲ …. ရာဇ၀င်ကားလား ဟာသကားလားကို မသိတော့ဘူး တော်တော်ရယ်ရတယ် …. ရှိသေးတယ် …. မီးမထွက်တဲ့ သေနတ်တွေနဲ့ပစ်နေကြတာလေ …. မင်းသားက နှစ်ချက်လောက်မှန်လည်း မသေဘူးဗျာ … လူဆိုးကျတော့ မမှန်လည်းသေရတယ် ….. မြန်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အားလုံး ဟာသကားများသာဖြစ်ပါသည်….. ဒါရိုတ်တာ ကုသိုလ် ရဲ့ ဇာတ်ကားလေးတွေကတော့ ပညာပေးလေးတွေပေါ့ ကြည့်သင့်တယ့် …….
ဒါကတော့ ထုံးစံပါပဲ ကိုကျော်ဟိန်းကြီး ကိုးရီးယားကားတွေသနားတာတော့မသိဘူး သူ့ကို ဘာတွေများလုပ်ပြမလဲလို့ ပစ္စလက်ခတ်မုန်တိုင်းကြည့်မိပါတယ် အရမ်းကို အထင်ကြီးသွားတယ် ဘာတွေမှန်းမသိအောင်ရိုက်ပြနိုင်တာ ဟား စကားတွေကလည်း ဘာတွေပြောမှန်းမသိဘူး ဒါကြောင့် ကိုးရီးယားကားကို သနားတယ်လို့ပြောတာကို ဆိုတာသိလိုက်ရတယ် မြန်မာကားကို မြန်မာလိုနားမလည်လို့ နာမည်နဲ့လိုက်တယ် ပစ္စလက်ခတ် ပဲ မြန်မာကားတွေအကုန်လုံး ဒီလိုပဲ ဘာတွေပြောနေမှန်းကိုမသိဘူး လူတိုင်းကဗျာဆန်ဆန်ပြောတတ်တယ်ထင်တယ် ပြီးရင် လူဆိုးတွေကလည်းနော် လမ်းဘေးလူမိုက်တွေလိုပဲ ဘာမှမသိ ငထူ ငအတွေ ပြောရင်တော့ ကုန်စရာမရှိတော့ပါဘူး ထပ်ပြောချင်တော့ပါဘူး ညစ်တယ်ကွယ်
ဖြစ်ရမယ်လေ မြန်မာပြည်ကဇာတ်ကားတွေဆို ဘယ်ကားမဆို ဇာတ်လမ်းသုံးချိုးတစ်ချိုးလောက်ရောက်ရင် ဆက်ကြည့်ဖို့မလိုတော့ဘူး …… နောက်အခန်းတွေ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိနေပြီလေ….. ပြောတော့ ကိုရီးယားကားတွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ် …… အဲ့လိုမပြောခင် သူတို့နီးနီးလောက်ရသပေးနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးရိုက်ပြပါအုံးလို့ …
“သမီးကတော့ သမီးအတွက်လုပ်ကွက်မပါရင် ဘယ်လောက်ပေးပေး အဲဒီကားကိုလက်မခံပါဘူး”
“ကျနော်တို့က ထမင်းရှင်ပရိတ်သတ်ကြီးကို အနုပညာနဲ့အလုပ်အကြွေးပြုလို့ပေးဆပ်ချင်တာပါ”
သရုပ်ဆောင်တွေကို စိတ်မဆိုးကြပါ အပြစ်မတင်ကြပါနဲ့ဗျာ။
ဒါပေမယ့် ငို နေတဲ့ ကားတော့ မကြည့်ချင်ဘူး … သမီးက ရယ်ရတဲ့ ကားပဲကြိုက်တယ် … တစ်ချို့ကားတွေက မရယ်ရဘူး … ပေါတာလွန်နေလို့ …
စိတ်မပူနဲ့ Gong Zhu မငိုရတော့ဘူး။
မြန်မာရုပ်ရှင်မင်းသားတွေအခြောက်လို သရုပ်မဆောင်ဘူးရင် မင်းသားမစစ်ဘူးဆိုလို့ မင်းသားတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်အခြောက်လိုသရုပ်ဆောင်ကြမှာပါ။
ဟုတ်တယ်..တော်တော်လေးကိုပေါတယ်..ဒီမနက် (11.10.10)For Choiceမှာလာတဲ့ မြန်မာကားဆို နာမည်ကြီး မင်းသားမင်းသမီးပါပေမဲ့ တော်တော်လေးကို ပေါပါတယ်..:)
ူဒါနဲ့ကြော်ငြာရအုံးမယ် Lionsgate ဆိုတဲ့ Action ကားအရမ်းမိုက်တယ်ဗျာ
နာမည်ကြီးမင်းသား ၉ယောက်ပါတယ် တကယ်ရှယ်ပဲ
Arnold, Starlone, Jetli, Jason Statham, Russia Arnold…..
ဒါကလဲ ပြည်တွင်းဖြစ်ကို အားပေးချင်လို့ပါဗျာ..
ကိုချာတူးလန် ရေ အဲဒီ Lions gate က company နာမည် ပါ ရုပ်ရှင်နာမည်က expandable ပါ ဆရာလုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးနော် မှားတာလေးတွေလို့ဖြည့်ပြောပေးတာ ပါ။
ကျနော်ကြည်ရတဲ့ အခွေမှာက Lionsgate နဲ့မင်းသားနာမည်တွေပဲတွေ့ လိုက်ရလို့ ပါ ခွေကာဗာကိုကြည့် တော့လဲ ယိုးဒယားစာတွေနဲ့မို့လို့ပါ
ခုထိလဲ Lionsgate လို့မှတ်နေတာ ပြင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ
မြန်မာကားတွေကြည့်ပြီး တကားချင်းအားရပါးရ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ဝေဖန်ထားတာတွေ ဖတ်ချင်သားဗျာ။
နောင်နှစ်မှာ ယူအက်စ်မှာ လုပ်မဲ့မြန်မာရုပ်ရှင်ပွဲတော်အတွက် ကြိုရွေးသူတွေကို အကြံပေးရမှာမို့ ပါ။
ပြီးတော့ မန္တလေးဂေဇက်စာဖတ်သူတွေကို ဗုတ်လုပ်ပြီး ရွေးစေချင်တာ..။
မြန်မာကားတွေကြည့်ပြီးရင် ဘာသင်ခန်းစာမှ မကျန်ခဲ့ဘူး၊ ကျောင်းသားကားတွေဆိုရင်လဲ ကင်တန်းမှာ ထိုင်မယ်၊ ကောင်မလေးတွေကို စမယ်၊ ဒါတွေပဲ တွေ့နေရတယ်။ စာသင်တာလဲမတွေ့ရဘူး။ စာကြိုးစားတာလဲ မတွေ့ရဘူး။ အားလုံးက အချစ်ပေါတောတောကားတွေကြီးပဲ။
လုံးဝ လုံးဝ လုံးဝ.. မှန်၏..
naywoonni ရရ် ချာတူးလန် မကားပါရစေနဲ့ဗျာ……
အင်း အသက် ၃၀ကျော်ရွယ်ကြီးတွေနဲ့ တက်ကသိုလ် ပထမနှစ်တက်ပြီး
ရည်းစားစကားလိုက်ပြောခံရတော့ ၁၆ နှစ်အိုက်တင်နဲ့ ရှက်သွေးဖြာပြနေတာလဲ
ကျုပ် တို့ နိုင်ငံက
ဖြတ်ဖောက်ချုပ် ပြီး မှ ရုပ်ရှင် ရိုက်မယ် ဆိုရင်တော့
ကျုပ် က ပရိုဂျူဆာ လုပ်လိုက်ချင်သပ
ပကာသန ပိုင်းတော့ တစ်ဟုတ်ထိုး တိုးတက်လာပါတယ် ၊ မင်းသား မင်းသမီးတွေ စီးတဲ့ကားတွေကို ကြည့်
လား ၊ တိုက်တွေ ဟိုတယ်တွေက်ို ကြည့်မလား အရမ်းတောက်ပြောင် ပီး အဆင့်မြင့်လာပါတယ် ၊
ဇတ်လမ်း လေးတွေလဲ ကောင်းသလိုလို နဲ့ action တွေက တကယ့်ပေါတောတော နိုင်လှပါတယ် ၊
idea ပိုင်းရယ် action ပိုင်းတွေ အဆင့်မြင့်လာစေချင်တယ် ၊ ဇတ်ကားကောင်းလေးတွေ ကြည့်ချင်ပါတယ်၊
တစ်ကယ်ဖြစ်နေတာက မြန်မြန်ရိုက် ပိုက်ပိုက်များများရရင်ပီးရော ဖြစ်နေသလားလို့ပါ ။
ပကာသန ပိုင်းတော့ တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်လာပါတယ် ၊ မင်းသား မင်းသမီးတွေ စီးတဲ့ကားတွေကို ကြည့်မ
ဒါပဲလေ.. ရိုက်လိုက်ရင်..ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မဟုတ်..
(ဥပမာ — မည်သည့်အလုပ်အကိုင်မှမယ်မယ်ရရမရှိပါဘဲနှင့် တစ်နေကုန် ပရာဒိုကြီးနှင့် လျှောက်သွားနေခြင်း .. အားအားယားယား ကန်းခြေတွင်သွားလန်းနေခြင်း)
ယုတ္တိဆိုတာလည်း မရှိ.. အဓိကဇာတ်ဆောင်ကလွဲလို့ တခြားအရံတွေဆိုလည်း..
စက်ရုပ်ကို အသက်သွင်းထားတဲ့အတိုင်း.. အဓိပ္ပာယ်မရှိ.
ခံစားနေတဲ့သူတွေက.. လအတွေ..ခွေးတွေမှမဟုတ်တာ.. နားလည်တာပဲ..
Satori က ထုတ်တဲ့ ကား တွေ ကြည့်ကြည့်ပါ…
ဒါပေမယ့် ပရိသတ်လက်ခံမှု အားနည်းပါတယ်
ဒါရိုက်တာ ရီဇော်၊ မင်းထင်ကိုကိုကြီး တို့ ရိုက်ပါတယ်
အဓိက အမျိုးသားဇာတ်ဆောင် က ရဲတိုက် ပါ.
“flash” ဆိုတဲ့ ကားကနေ စပြီး ကြည့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ..
အမှောင်ငွေ့ ရနံ့၊ သူ၊ လက်နဲ့ထိရင်ရွှေ၊ ရွာ
Heart4စတာတွေ အားပေးကြည့်ရှုဖူးပါတယ် ကောင်းပါတယ်..
“သူ” ကိုလည်း ကြိုက်ပါတယ်.. နောက်ထပ် ရှိသေးတယ်.. မြစ် တဲ့…အဲဒါတော့ သိပ်မကြိုက်ပါဘူး..
ဒါပေမယ့် မြစ်ရဲ့ ရှုခင်းတွေပါတယ်.. ဧရာဝတီ ပါတယ်..
Satori Production ကပါ.
မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေကလည်း ဘယ်လို သရုပ်ဆောင်နေမှန်းမသိဘူး ချာလိုက်တာ
သူတို့လည်း အဲလို ဘယ်လုပ်ချင်ပါ့မလဲ…..ဒါရိုက်တာ အကြိုက်လုပ်ရတာလေ..
သူလည်း အဲဒီလိုဘယ်လုပ်ချင်ပါ့မလဲ ထုတ်လုပ်သူ အကြိုက် ရိုက်ပေးရတာ..
သူလည်း အဲဒီလို ဘယ်လုပ်ချင်ပါ့မလဲ. ပရိသတ် အကြိုက် ရိုက်ပေးရတာ..
ဇာတ်ကား ကောင်းလေးတွေ စီးပွားဖြစ်အောင် ကျုပ်တို့ကလည်း အားပေးလိုက်ရအောင်..
မြန်မာဇာတ်ကား ဈေးကွက်ပျက်ရတာ မင်းသားမင်းသမီးတွေ ဈေး မတရားတောင်းတော့ ဇာတ်လမ်းအတွက် အားမစိုက်တော့ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လုပ်ကြတာ
အခုခေတ်မှာ မွန်းကျပ်နေကြတော့ ရယ်စရာနဲ့တင် ပြီးနေကြတယ်
၂၀၁၀ ခုနှစ်အတွက် ၁၅ ကားမှာ ၆ ကားပဲ အတည် .. ကျန်တာ ဟာသကားတဲ့
အဲဒီ ၁၅ ကားထဲက ဆုပေးရင်တောင်မှ ???????????
ပေါ်လစီ နဲနဲ ပါတဲ့ ကား ရိုက်ရင်ပဲ အကယ်ဒမီအတွက် မှန်းလို့ ရနေပြီ
ဒါတောင် .. သူ့ကျွန်မခံပြီလို့ ထ အော်နိုင်မှ နော်